कुन्ती जोशीसँगै १७ महिला प्रदेश सांसद – ToplineKhabar
कुन्ती जोशीसँगै १७ महिला प्रदेश सांसद
प्रत्येक्ष निर्वाचनतर्फ एक मात्र महिला सदस्य जितेको प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फका समेत महिलाको संख्या १८ पुगेको छ ।
प्रत्येक्षमा १७ सिट सहित पहिलो भएको एमालेले समानुपातिकमा प्राप्त गरेका सवै आठ सिटमा महिला पठाएको छ । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनै पर्ने भएपछि एमालेले आठै महिला पठाउनु पर्ने भएको हो ।
एमालेले खस आर्य समुदायबाट माया भट्ट, मनकुमारी साउँद, पूर्ण जोशी र सुशिला बुढाथोकीलाई पठाएको छ । यस्तै थारु समुदायबाट चुनकुमारी चौधरी, दलितबाट दुर्गा बि.क. र अर्चना गहतराज र पिछडिएको क्षेत्रबाट माया तामाङ बोहरा सांसद बनेका छन ।
यस्तै प्रदेश सभामा प्रत्येक्षतर्फबाट १० सिट जितेको माओवादीले समानुपातिकमा चार सिट हात पारेको थियो । माओवादीले चारै महिला पठाएको छ । निर्मला बडाल (जोशी) र कुन्ती जोशीलाई खस आर्य समुदायबाट माओवादीले सांसद बनाएको छ । यस्तै थारु समुदायबाट बिनिता चौधरी र दलित समुदायबाट शान्ति नेपालीलाई सांसद बनाएको छ ।
← गर्भावस्थामा सेक्स कति सुरक्षित ?
नेपाली काँग्रेस डाँडा वारि बामगठबन्धन डाँडा पारि →
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित ९ दलको बैठक जारी